महराकाण्डको प’र्दाफास गरेका पत्रकार अजयबाबुले भने –ग’लत आ’रोप लगाउने रोशनी स’जायको भा’गिदार बन्ने कि नबन्ने ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/महराकाण्डको प’र्दाफास गरेका पत्रकार अजयबाबुले भने –ग’लत आ’रोप लगाउने रोशनी स’जायको भा’गिदार बन्ने कि नबन्ने ?
काठमाडौं । ब’लात्कार प्र’यासको अ’भियोग लागेका कृ’ष्णब’हादुर म’हराले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट स’फाई पाएपछि अजयबाबु शिवाकोटी भन्छन्– ‘अदालतको फै’सला पनि मेरा लागि त्यस्तै समाचारको विषय हो, जसरी रो’शनी शा’हीले कृ’ष्णब’हादुर म’हरालाई लगाएको आ’रोपलाई मैले समाचार बनाएँ ।’म’हरामाथि लागेको अ’भियोगका दुई सू’त्रधार थिए– रो’शनी शाही र अजयबाबु शिवाकोटी ।अजयबाबु हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक तथा नेपाल प्रेस यु’नियनका महासचिव हुन्। १४ अजोज २०७७ का दिन हाम्रा कुराका लागि अजयले रो’शनी शाहीसँग लिएको अ’न्तर्वार्ता प्र’काशित भयो ।
लगातारको वर्षाका कारण सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव तीव्र रुपमा बढेपछि खोलियो २६ ढोका